Epc - Guangzhou Airwoods Environment Technology Co., Ltd.
EPC na-anọchite anya Injinịa, Mgbapụta, Nrụpụta ma bụrụkwa ụdị ama ama
EPC na-anọchite anya Injinia, Mgbapụta, Nrụpụta ma bụrụkwa ụdị ama ama nkwekọrịta pụtara ama. Onye na-ahụ maka injinia na onye na-ewu ụlọ ga-arụzu ihe eji arụ ọrụ nke ọrụ ahụ, weta akụrụngwa na akụrụngwa niile dị mkpa, wee wuo iji nyefee ndị ahịa ha ọrụ ma ọ bụ akụ.
Airwoods toro na ụlọ ọrụ na-enye ọrụ Engineering, Procurement, and Construction (EPC) zuru oke ma na-akwado ndị ahịa ya n'oge ndụ niile nke ọrụ. Ndị ọrụ ụlọ ọrụ ahụ nwere ahụmịhe, ọtụtụ ndị ọkachamara na-agba mbọ inye ndị ahịa ha ụdị ọrụ dị iche iche site na mmalite ọrụ na nkọwa na imewe, iwu, inye ọrụ na ọzụzụ, ịrụ ọrụ na ndozi. Ihe ịga nke ọma anyị na-enye ọrụ EPC bụ n'ihi ikike anyị nwere inye ọtụtụ ọrụ gụnyere injinia, imewe, ịgha ụgha na iwube saịtị.
Site na otu ndị maara ihe ma nwee ahụmịhe, usoro ọrụ egosipụtara, yana ọkachamara ụlọ ọrụ na-enweghị atụ, anyị nwere ike ịnapụta ọrụ gị n'oge na mmefu ego. Anyị na-ejere mba na uwa ahịa n'elu 80 mba.